Abavelisi be-inductor yamandla kunye nababoneleli - China amandla eIncuctor factory
I-inductor emile okwe-I yinto ye-elektroniki yokungenisa eyakhiwe ngesakhelo esisisiseko se-I esimile kunye nocingo lobhedu olungagungqiyo. Licandelo elinokuthi liguqule imiqondiso yombane ibe yimagnethi. I-inductor ezimilise ngokwazo yi-inductor. Amathambo e-inductor amilise i-I axhaswe ngokubhijela i-coil yentsimbi yobhedu. I-inductance emile okwe-I yenye yeempawu zesekethe zombane okanye izixhobo.
I-Toroidal inductors zizinto ezingenzi nto ezibonisa i-coil yentsimbi okanye i-enameled enenxeba yocingo kwifom emilise nge-ferrite okanye ngentsimbi eyimpuphu. Isebenziseka kwaye ithembekile, ii-toroids zisetyenziselwa uyilo lwesekethe ephantsi efuna ukungeniswa okukhulu. Zisetyenziswa ngokubanzi kwezonyango, kwimizi-mveliso, kwinyukliya, kwiimveliso zeaudio, kumqhubi we-LED kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo,kunye nezinye izicelo ze-elektroniki. Ukuba uyilo lwesekethe yakho lufuna umgangatho we-toroidal inductor, zifumane kubavelisi abakhokelayo, kwi-future Electronics.